Angawaa Ol aanaan Keeniyaa Yakka Irraa Walaba Ta'an
Kan mana murtii yakkaa qoratu kan sadarkaa addunyaan shakkamanii turan ministeerri barnootaa Kenyaa Wiliaam Ruutoo himannaa irratti dhiyaate jalaa walaba ta'an. Guyyoota torbaaf falmiin seeraa erga eggeessamee booda kan hojii irraa rarraasamanii tuaran ministeerichi himannaa yakkaa irratti dhiyaate hafeefii jira.
Abbaan murtii ol aanaan Mr. Gilbar Muteenbii himannaa dhiyaate mormuu dhaan ragaa gahaan akka dhiyaatu gaaftaniiru. Kana jechuun yakki hin raawwanne jechuu miti, garuu ragaan dhiyaate ofi irraa falmachuuf quubsaa miti jedhan.
Mr. Ruutoon kan aangoo irraa rarraasaman ujummoo bishaaniif lafa bosaonaa doolaara miliyoona 3.4 baasu irraa walakkaa miliyoonaa fudhatan jedhamuun himannaa irratti dhiyaateen ture. Gabaasa guutuu MP3 tuquun dhaga'aa